ओलीको प्रश्न: झरेको फलले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने? - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
ओलीको प्रश्न: झरेको फलले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने?
लेखक : लेखापढी १८ पुष २०७७, शनिबार २१:४१ मा प्रकाशित
प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक नेतृत्व कसको भन्नेबारे विमति चर्किरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी आफूहरूले नै बनाएको भन्दै विरोधीहरूको निन्दा गरेका छन्।
असन्तुष्ट समूहको अगुवाइ गरिरहेका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा ‘आफूहरू असली हो’ भनेर निवेदन दिएको जानकारी पाएको ओलीले बताए।
काठमाण्डूमा शनिवार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “जसको घर हो, जसको जमिन हो, ऊ मेरो हो भन्दै निवेदन हाल्न जान्छ? यो पार्टी हामीले बनाएको हो। विधिसम्मत ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ।”
“झरेको फलले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने?”
प्रतिनिधिसभामा काम गर्न नदिइएको र सरकारलाई काम गर्न नदिइएकाले विघटन गर्नु परेको उनले इङ्गित गरे।
“लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो। संविधान खतरामा पर्‍यो। स्थायित्व खतरामा पर्‍यो,” उनले भने।
आफ्ना पुराना पार्टी सहकर्मीहरूप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भारत र चीनका नेताहरूले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराको समर्थन गरेको तर पार्टीकै नेताहरू प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले चर्चै नगरेको उल्लेख गरे।
उनले चुनावका काममा निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी तथा जनता लागिसकेकाले त्यसमै आएर आफ्नो हैसियत देखाउन असन्तुष्टहरूलाई चुनौती दिए।
“आफ्नो दलको लगभग दुईतिहाइको सरकार भताभुङ्ग गर्ने अनि रङ्गीविरङ्गी पुतली सरकार बनाउने गरि देशलाई अस्थिरतामा फसाउने प्रयास रोक्नका निम्ति (विघटन) गरिएको हो,” उनले भने।
आफूसँग ६३/६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन रहेका बेला अब सरकार चलाउन्न भनेपछि बाँकी के विकल्प हुन्छ भनेर ओलीले प्रश्न गरेका थिए।
राष्ट्रको बाँकी अवधि खेर फाल्न नदिनका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य रहेको भन्दै अब संसद् पुनर्स्थापना हुन नसक्ने उनले बताए।
बादल पनि गर्जिए
यसअघि भेलालाई सम्बोधन गर्दै उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्ना पार्टीभित्र पदको भागबन्डाबारे विवादले अहिलेको स्थिति आएको बताए।
“केही नेता साथीहरूको जङ्गली महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न र पद प्राप्ती गर्नका लागि दुस्साहसी मानसिकताका कारण यो स्थिति पैदा भएको छ।”
भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीभित्रैबाट ‘राजनीतिक कू’ गरिन लागेकोले प्रधानमन्त्रीले ‘साहसिक राजनीतिक कदम’ चालेको बताए।
पार्टी विग्रह भएपश्चात् उनले प्रचण्डको साथ छाडेर प्रधानमन्त्री ओलीको साथ दिएका छन्।
भागबन्डामा केन्द्रीत आन्तरिक किचलोका कारण दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त प्रतिनिधिसभा ‘अस्थिरताको केन्द्रमा’ परिणत गराउने खतरा भएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपरेको उनले भेलालाई बताए।
‘आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अपराधीको रूपमा खडा गर्ने आरोप पत्र फिर्ता लिन नमानेपछि’ पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको उनले बताए।
पार्टीभित्र कलह बढेपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध प्रतिवेदन पेश गरेका थिए जसले झगडा झनै बढेको थियो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको समूहमा वैशाखमा निर्वाचनमा केन्द्रीत हुने बताइरहेको छ भने प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा थप विरोध कार्यक्रम घोषणा
यसबीच प्रचण्ड-नेपाल समूहले पुस २० देखि माघ २३ सम्मका निम्ति दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ।
ती कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा भेला, विभिन्न सहरहरूमा भेला, दलहरूसँग र नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया लगायत माघ २३ गते काठमाण्डूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गरिने उल्लेख छ।
पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक दिने र राष्ट्रको नाममा क्षमायाचना गरेर गलत कदम सच्च्याउन अनुरोध गर्ने पनि उल्लेख छ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पहिलो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूपश्चात् विघटन विरुद्ध रहेका सबै दलहरूसँग संयुक्त सङ्घर्षको पहलकदमी स्वरूप वार्ता गरेको तर त्यसको अझै कुनै निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ।